» “लुकीलुकी, कसले हेर्दैछ तपाइँको, फेसबुक,प्रोफाइल ? यसरी थाहा, पाउनुहोस्” “लुकीलुकी, कसले हेर्दैछ तपाइँको, फेसबुक,प्रोफाइल ? यसरी थाहा, पाउनुहोस्” – हाम्रो खबर
हाम्रोखबर संवाददाता 110 Views
“काठमाडौं । सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकमा प्रयोगकर्ताहरु यति आशक्त भैसकेका छन् कि उठबस, घुमफिर तेरी बस्ने, खाने सुत्ने सम्मका आफ्ना नितान्त निजी जानकारीहरु समेत फेसबुकमा शेयर गर्दछन् ।”
“कतिपय मानिसहरुले त फेसबुकबाटै आम्दानी पनि गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात् समग्रमा फेसबुक यस्तो प्लाटफर्म बनेको छ जसले हाम्रो लगभग सबै खालका आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ ।”
“फेसबुकमा मित्रता कायम गर्नु निकै सजिलो छ । तपाइँलाई जो सँग दोस्ती गर्नुछ, मात्र उसलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाए पुग्यो । यदि उसले तपाइँको अनुरोध स्विकार गर्यो भने भयो मित्रता ।”
“यद्यपि कहिलेकाहीँ फेसबुकमा भएको मित्रतामा दरार पनि आउँछ, जसका कारण फेसबुके साथीहरु एक अर्कालाई ब्लक वा अनफ्रेण्ड गर्दछन् । तर साथीबाट हटाइसकेको साथीको फेसबुक प्रोफाइल भने लुकीलुकी हेर्दछन् । यदि तपाइँलाई आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल कस कसले हेरिरहेको छ भन्ने जान्ने इच्छा छ भने त्यसको निकै सजिलो उपाय छ ।”
“आइफोन प्रयोगकर्ताले सहज रुपमा फेसबुक एपको प्राइभेसी सेटिंग्समा गएर आफ्नो प्रोफाइल हेर्ने मानिसहरुको बारमा जानकारी लिन सक्दछन् ।”
“कम्प्युटरबाट वेब भर्सनमा फेसबुक चलाउँदा चाहीँ निम्नानुसारको विधि अपनाउनुपर्दछः”
आफ्नो ल्यापटप वा डेस्कटपमा कम्प्युटरमा फेसबुक लगइन गर्नुहोस्
टाइमलाइनमा कुनैपनि ठाउँमा राइट क्लिक गरेर View page source मा क्लिक गर्नुहोस् CTRL+U थिच्नुहोस्
त्यसपछि ctrl+f थिचेर सर्च बारमा BUDDY_ID सर्च गर्नुहोस्
BUDDY_ID सँगै तपाइँले १५ अंकको कोड प्राप्त गर्नुहुन्छ
उक्त कोडलाई कपी गरेर ब्राउजरमा facebook.com/profile ID-१५ अंकको कोड) टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्
त्यसो गर्दा सिधै त्यहीँ व्यक्तिको फेसबुक प्रोफाइल खुल्दछ, जसले तपाइँको प्रोफाइल भिजिट गरेको हुन्छ ।
“तपाइँको फेसबुक प्रोफाइल कस कसले चेक गरिरहेको छ यो पत्ता लगाउने अर्को तरिका पनि छ । यसका लागि तपाइँ क्रोम एक्सटेन्सनको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । वास्तवमा गुगल क्रोममा गएर तपाइँले Super Viewer for Facebook जस्ता एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुपर्दछ ।”
“यसको सहयोगमा तपाइँले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल कस कसले हेरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ । यद्यपि यी दुबै तरिकाबाट तपाइँको फेसबुक प्रोफाइल सम्बन्धित व्यक्तिले कुन मितिमा हेर्यो भन्ने कुरा चाहीँ पत्ता लगाउन सकिँदैन ।